As of Fri, 10 Jul, 2020 15:30
धादिङ- वन्दावन्दी शूरु भएको ७२ औ दिनका दिन आर्दश माद्यामिक विद्यालय गजुरीले बस्तीबस्तीमा पुगेर बिद्यार्थीहरुको नाम लेखाउने र पाठ्यपुस्तक वितरण गर्ने काम शुरु गरेको छ । विद्यालयमा क्वारेन्टिन बनाए पछि विद्यार्थीहरुलाई विद्यालयमा बोलाएर नाम लेखाउने र पुस्तक वितरण गर्न असज भएकाले बस्तीबस्तीमा पुगेर पाठ्यपुस्तक वितरण गरेको प्रधानाध्यापक राम अर्यालले बताए ।
पहिलो दिन वुधवार गजुरी गाँउपालिका वडा नं. १ र २ को अन्तरगत नयाँवारी, आर्दश मावि, चालिसे, सिटिभिटी, विहानी पम्प केन्द्रबाट कक्षा एक देखि दशसम्मका छात्रछात्रालाई पाठ्यपुस्तक वितरण गरिएको छ । यसैगरी दोश्रो दिन विहीवार सिद्धलेक गाँउपालिका वडा नं. ६ को खरमटार, समिटार र माझिाटार केन्द्रबाट पाठ्यपुस्तक वितरण गरिएको छ । पूर्व प्राथमिक तह देखि कक्षा दशसम्म दशसम्म आठ सय २० विद्याथी रहेकोछन् । बिद्यालयसंग बस भएका कारण बिद्यार्थीहरुलाई पाठ्यपुस्तक बस्तीबस्तीमा पुगेर वितरण सहज भएकोे हो । यसरी बस्ती बस्तीमा पुगेर पुस्तक वितरण गर्दा विद्यार्थीहरु निकै खुशि भएकाछन् । पाठ्यपुस्तक वितरण गर्न ढिलो भएको महशुस गरेका छौ प्रधानाध्यापक अर्यालले भने । शुक्रवार गजुरी गाँउपालिका वडा नं. ५ र ६ मा पुगेर पुस्तक वितरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
वुधवार र शुक्रवार गरी आठ केन्द्रबाट कक्षा एकका १२ जना, दुईका नौ जना, कक्षा तीनका नौ जना, कक्षा चारका १७ जना, कक्षा पाचका २२ जना, कक्षा छका ५० जना, कक्षा सातका ३४ जना, कक्षा आठका ३४ जना, कक्षा नौका ३४ जना र कक्षा दशका ३६ जना गरी दुई सय ५७ जना छात्रछात्रालाई पाठ्यपुस्तक वितरण गरिसकेको छ । पूर्व प्राथमिक तहदेखि माद्यामिक तहसम्म गरी २७ जना शिक्षक रहेको विद्यालयमा २४ जना सरकारी श्रोतका र ३ जना नीजि श्रोतका शिक्षक रहेकाछन् । ती शिक्षकहरु मध्ये १८ जना विद्यालयको सेवा क्षेत्र भित्रका रहेकाछन् । त्यस कारण पनि विद्यार्थीहरुलाई पाठ्यपुस्तक वितरण गर्नका लागि सुचना प्रवाह गर्न सहज भएको हो । कक्षा एक देखि पाँचसम्म पूर्णरुपमा अंग्रजी माध्यममा र कक्षा छ देखि नौसम्म नेपाली र अग्रेजी दुवै माध्यममा पढाउने योजना रहेको प्रअ अर्यालले बताए ।
विश्वभर माहामारीका रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) ले विश्वका प्रायः देशहरु वन्दावन्दीमा बसिरहेकाछन् । नेपाल पनि गत चैत्र ११ गतेदेखि वन्दावन्दीमा बसेको छ । वन्दावन्दीको असर नपरेको क्षेत्र नै बाँकी छैन । शिक्षा क्षेत्र सवै पन्दा पहिले नै प्रभावित बनेको थियो । कोरोना भाइरसबाट नेपालमा सवैभन्दा पहिला प्रभावित भएको शैक्षिक क्षेत्र हो । माद्यामिक शिक्षा परिक्षा दिन परीक्षा केन्द्र पुगेका परिक्षार्थीहरु चैत्र ६ गते घर फर्के बसिरहेकाछन् ।